Haayada Human Rights Watch oo ka codsatay AMISOM in ay baaraan dilka 14 qof oo lagu dilay sanadkii tagay deegaanka Wardiinle ee gobolka Bay - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaHaayada Human Rights Watch oo ka codsatay AMISOM in ay baaraan dilka 14 qof oo lagu dilay sanadkii tagay deegaanka Wardiinle ee gobolka Bay
Haayada Human Rights Watch oo ka codsatay AMISOM in ay baaraan dilka 14 qof oo lagu dilay sanadkii tagay deegaanka Wardiinle ee gobolka Bay
January 26, 2017 Puntland Mirror Somalia 0
Laetitia Bader, cilmi-baarto ka tirsan haayada HRW.. [Sawirka: Archive]
Nairobi-(Puntland Mirror) Haayada Human Rights Watch ayaa u sheegtay Howlgalka Midowga Afrika ee gudaha Soomaaliya in ay qaataan masuuliyada ku aadan dhacdo ka dhacday gudaha koonfurta Soomaaliya, taasoo ay ku dhinteen 14 qof oo shacab ah.
Human Rights Watch (HRW) ayaa shalay oo Arbaco ahayd sheegtay in AMISOM ay sii daayaan natiijada baaritaanka dilkii dhacay bishii Luulyo ee sanadkii lasoo dhaafay.
Dhacdadaas, ayaa ciidamada AMISOM rasaas ku fureen dad quraan ku akhrinayay qof jiran gudaha deegaanka Wardiinle ee gobolka Bay, taasoo lagu dilay 14 qof oo rayid ah oo ay ku jiraan qaraabada bukaanka iyo macalimiin quraan.
“Dhimashada odayaal dhaqameed, macalimiin iyo wadaado oo lagu baaba’shay gudaha deegaanka Wardhiinle lama cadayn dhacdadaas,” sidaa waxaa bayaan ku yiri Laetitia Bader oo ah cilmi-baarto ka tirsan haayada HRW.
Waxay intaas ku dartay: “AMISOM iyo masuuliyiinta Itoobiya waxay u baahanyihiin in ay qabtaan ciidamadooda si loo faahfaahiyo sii daynta waxa kasoo baxa baaritaankooda, lana xaqiijiyo dambiilayaasha in la horkeeyo cadaalada magdhowna la siiyo dhibanayaasha.”
HRW ayaa sheegtay in ciidamada ku lug lahaa dhacdadaas ay jabiyeen sharciga caalamiga ah ee insaanimada waxayna u sheegtay dowladda Itoobiya in ay maxkamadeyso kuwa ka masuulka ah.
Ciidamada Itoobiya oo katirsan howlgalka AMISOM ayaa geystay toogashadaas lagu laayay dadkaas rayidka ahaa.
Ugu dambayna HRW ayaa ka codsatay Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay, oo kulmi doona beri oo Jimce ah in ay ka doodaan xaalada gudaha Soomaaliy, iyo deeqbixiyeyaasha caalamiga ah ee taageera AMISOM si la iskula meel dhigo muhiimada hubinta in AMISOM ciidamadoodu xaqiijiyaan akhlaaqiyaadka xuquuqul insaanka ayna u istaagaan waajibaadkooda.
Saraakiisha AMISOM wali kama aysan hadlin hadalka kasoo baxay haayada HRW.
November 11, 2017 Haayada Xuquuqda Aadanaha oo walaac ka muujisay go’aanka ay Somaliland ku xanibayso warbaahinta buslahada inta lagu jiro maalmaha doorashada
January 21, 2017 Murashixiinta guddoomiyaha aqalka sare iyo ku-xigeenadiisa oo khudbadahooda kasoo horjeedin doona xildhibaanada aqalka sare ee DFS
Al-Shabab says it killed 57 Kenyan soldiers in attack on military base
Garoowe-(Puntland Mirror) Maleeshiyada ISIS ayaa sheegatay masuulida weerarkii qoryaha loo adeegsaday ee ka dhacay huteel kuyaala magaalo xeebeedka Muqdisho maanta oo Arbaco ah, sida ay kooxdu ku sheegtay bayaan ay ku qortay warbaahinteeda Acmaaq. Huteelka [...]
Madaxweynaha dowladda Puntland oo qaabilay safiirka Midowga Yurub u qaabilsan Soomaaliya
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowladda Puntland Siciid Cabdullahi Deni ayaa safiirka Midowga Yurub u qaabilsan Soomaaliya maanta oo Arbaco ah ku qaabilay madaxtooyada Garoowe. Kulanka u dhaxeeyay madaxweyne Deni iyo safiir Nicolas Berlanga Martinez ayaa diirada [...]